UkuSonga okungashukumiyo koSetyenziso | Martech Zone
Apha ndihleli kwigumbi lasehotele eMilwaukee, eWisconsin. Iqela lethu libonisa inkampani apha ngomso kwaye ibuyela e-Indianapolis. Ndithenge isuti entsha kolu hambo - ibithengiswa malunga neepesenti ezingama-70 kwaye khange ndikwazi ukuyidlulisa. I-brown brown - iphantse ibe mnyama - kwaye intofontofo. Khange ndithenge suti kwiminyaka eliqela ndiye ndaziphatha kuyo yonke impahla-kubandakanya izihlangu ezityibilikayo.
Kwisikhululo senqwelomoya iMidway ndiye ndancokola nomnye umhambi kwaye ndakhankanya ukuba isuti yam ibipakishwe kwingxowa yam yokuphatha. Umfo wayengakholelwa ukuba ndine suti ebhegini yam.
Ngapha koko, bendihambe lonke uhambo lwam ngo Ingxowa yomyalezo -Ukutshintsha kweempahla, ilaptop, imagazini, njlnjn.Ndinxibe isiliphu kwizihlangu zelokhwe ngee jean zam, ndaye ndakhangeleka ngathi ndingumhambi olungileyo- yayikukugcina indawo. Kwaye-bayatyibilika ukuze ndikwazi ukuyenza ngokhuseleko ngokukhawuleza. Inkqubo ye- Ityala leLogic Messenger Bag Ndinegumbi elingasemva eligangathiweyo elilingana neMacBookPro ngokugqibeleleyo, ke akukho mfuneko yokuba ndiphazamise ukupakisha kwam ukufikelela kwiLaptop!
Xa bendihlala eDenver, bendibukele umboniso wakusasa apho umntu abonise indlela yokusonga isuti ukuze ingabi nemibimbi. Abantu bahlala bezisa ingxowa enkulu yengubo okanye bayisonge. Ingxaki kukuba ibhegi yengubo iyasongwa, kwaye ukuyisonga kubangela imibimbi. Ukuba uyisonga ngokufanelekileyo isuti, uphelela ngaphandle kwemibimbi konke konke kwaye unokuyilungela phantse kuyo nantoni na.
Ndingumfana omkhulu-ke unokucinga ukuba ingakanani indawo enesuti kufanele thabatha nam.
Qengqa iibhulukhwe zakho
Ukurola iblukhwe yakho, qiniseka ukuba iblukhwe ibekwe iblukhwe ecaleni kwayo kwaye ii-crease zilungelelaniswe ukuze iblukhwe ithe tyaba ngokugqibeleleyo. Ukuqala esinqeni, qengqeleka iblukhwe ngokucocekileyo de ibe isesandleni esihle. Zibeke engxoweni yakho okanye kwimithwalo kwikona ethambileyo apho zingayi kukhuhlwa khona.
Qengqa ibhatyi yakho
Ukuqengqa ibhatyi yakho kuthatha kancinci. Uya kufuna ukugoba ngobunono, ungasongi :), ibhatyi yakho ukuze ubuyise amagxalaba ukuba azichukumise. Ngale ndlela, nakuphi na ukusonga kwenzeka ngokuthe ngqo embindini womqolo kwaye kujongeka kwendalo. Ngobunono beka imikhono idiagonally ezantsi kwelinye icala lebhatyi. Awufuni ukuyisonga ngokungathi uyigobe. Ukuphela komkhono kufuneka kuphephezele ngezantsi kweqhosha elisezantsi kwebhatyi.
Ukuqala egxalabeni, qengqa ibhatyi uyinyuse - kodwa qiniseka ukuba awuyikubambi njengokuba usiya. Kuya kufuneka yenze umqulu otyebileyo kuneebhulukhwe zakho, kodwa iya kuhlala ikukuhamba! Sukufaka izinto engxoweni ngeenxa zonke, zibeke nje apho kunye neekawusi, isuti engaphantsi, njalo njalo ngaphezulu.
Ukothula iimpahla zakho
Ngokukhawuleza nje ukuba ufike kwindawo oya kuyo, qiniseka ukuba ukhupha ibhegi, uvula isuti, uyixhome. Kuya kufuneka uyifumane ikwimeko egqibeleleyo! Uxolo andinayo imifanekiso yokudibanisa- ndisendleleni ngoko ikhamera yeselfowuni ayiyinqumli.
QAPHELA: Akubonakali ngathi ndinethamsanqa elininzi ngehempe zokunxiba - ndihlala ndibadlalisa ngentsimbi ehotele.
tags: U-erik qualmanezihlekisayousetyenziso lweselulanohlobo oluhambayoUkulungiswa kwefowuniiisayithi ezihambayolumoUbungqinaumntu ofanelekileyoInguquko kwimithombo yeendaba kwezentlalo
Ukugcina i-Dime ukuze uchithe iDola
Mar 6, 2008 ngo-11: 43 AM
Ulibale ezo ngcebiso malunga nokubhloga okungcono okanye iiwijethi ezahlukeneyo zesicelo seWordPress, olu lulwazi oluluncedo ngokwenene! 🙂
Mar 6, 2008 ngo 1:41 PM
UDoug, ndiyayithanda ifashoni kunye neesuti, eyakho isandi jazzy, ilunge njani? Ndifumana izinto zam ezininzi, ndingu 6ft2in kunye nama-260 lbs. Indoda yomsebenzi wakho akufuneki ibe neesuti ezintle ezingaphantsi kwe-3 zeshishini, iblazer eluhlaza okwesibhakabhaka, idyasi yomsele, iibhulukhwe ezingwevu kunye nomnyama, kunye nengubo yenyonga kakhulu yemihla yakho eshushu, Into yokuqengqeleka, kufuneka ndiqiniseke
Mar 7, 2008 ngo 6:17 PM
Ukunambitheka kwam kwizambatho kungaphezulu kohlahlo-lwabiwo mali lokuzithenga, JD! Esi suti sithile asikho ngaphandle kwe-rack-ke kuya kufuneka ndiyifumane kumthungi. Imikhono imalunga ne-intshi inde kakhulu, kodwa yonke enye into intle. Ndinqwenela ukuba iibhulukhwe zibe nethambeka lesilika, enye isuti yam inale nto kwaye intle ukunxiba kunejean endala.
Ukuqengqeleka kuyasebenza! Ndiyathembisa 🙂
Mar 7, 2008 ngo 5:14 PM
Wawusakuba yindoda yomkhosi, wena! Ndifunde le gem yokupakisha xa bendiphumile e-CA ndindwendwele umhlobo wam osenyongweni owayemi apho ngelo xesha. Bendipakisha ibhegi yam ndizogoduka kwaye ibimcaphukisa nyani. Uthathe ngaphezulu waqengqa yonke impahla yam kwaye yaphela ilingana nendawo yesithathu yendawo endandiyithathile. Ndicinga ukuba yinto yasemkhosini b / c kuphela kwabantu endibaziyo ukuba bapakishe ngale ndlela baye baba semkhosini okanye banempembelelo kubomi babo.
Nokuba kunjalo, ndisonge ngokuqengqa yonke into ukusukela. Ndihlala ndifika ndingenayo imibimbi (eyiyeyobukho bobukho bam) kwaye ndinamagumbi amaninzi ezinye iisundries. Ihempe zokunxiba, nangona kunjalo, ewe, kufuneka zihlala zichukunyiswa yintsimbi.
Iposi elungileyo, kunye nolwazi olubaluleke kakhulu ukuba nalo njengomntu oshishino.
Mar 7, 2008 ngo 6:22 PM
Inokuba ndiyaluphala… emva kwam ngelaxesha 'yayisisiqwengana'. Khange siqengqe kwanto, kodwa bekukho iingubo kwiimpahla zethu ngokusonga! Ndisazisonga iitawuli njengoko ndenzile kwiBoot Camp kwaye andinakuzibamba zisongelwe ngokwahlukileyo. Ukukhazeka!
Mar 8, 2008 ngo 10:08 PM
Kufuneka uzame ukuqengqa isuti kwaye ubone ukuba isebenza ngcono kunepakethi yesuti endiyisebenzisayo ngoku. Icebo elilandelayo-ukufumana ihempe kwindawo endiya kuyo ngaphandle kwazo kujongeka ngathi ndilele kuzo. Naliphi na iingcebiso malunga naloo nto, nabani na?
Juni 28, 2008 ngo-9: 42 PM
Ndithenga iihempe ezingenazintsimbi kumhlaba ophela ndizisonge. Ukuba kukho nayiphi na imibimbi okanye ii-creases, enye iswayipha yentsimbi yanele. Ukuba ndiyazi ukuba ndiza kunxiba ibhatyi, andikhathazi noku-ayina. Iicreases ziyaphuma kungaphelanga nemizuzu engama-30 ukuba ndinxibe ibhatyi yesuti.
Juni 23, 2009 ngo-1: 21 AM
enye indlela - tsala ingalo enye yebhatyi ngaphakathi ngaphandle, kwaye uqhubeke ukuze ubenalo igxalaba elinye ngaphakathi ngaphandle. Faka enye ingalo ngaphakathi ngaphakathi. Iigxa zamagxa kufuneka zigxunyekwe. Emva koko qengqa ibhatyi.
Abantakwabo Brooks imibimbi yasimahla yehempe zezona zilungileyo- azingabi mibimbi.